GOOD FRIDAY SOMALILAND | Somaliland.Org
GOOD FRIDAY SOMALILAND
September 25, 2009	GOOD FRIDAY SOMALILAND
Mahad Alle ayaa leh Dadka reer Somaliland oo dhan xalay wel-wel iyo walbahaar ayey la seexan wayeen, aniga oo ka mid ah dadka somalilanders ah ee debeda ku noo marna ma aan seexan xaleto waxaan filayaa xataa in aanu cadawga somalilandna xalay seexan!! Sida aan wada ognahay Somaliland cadaw badan ayey ledahay gudaha iyo debedaba waxaana xun oo daran ka gudaha, cadawga debeda wax ku mayeelo ila uu helo cadaw gudaha jooga. Waxaan Alle ugumahad naqayaa badbadada Alle badbadiyey dadkaas,umadaas dulmigu dilooday.
Waxaan hanbalyo iyo aman u soo jedinayaa Golaha Guurtida ,shir-gudoonka Guurtida, shacabka Somaliland, gar ahaan shacabka reer Hargeysa oo ayamahan oo dhan u tagnaa masirka ummada,isla-markaas waxaan cebeynayaa Hunguri-dhibanada ka-doortay xilkii loo egmaday dollaro meel madaw loogu dhibay. khatarna geliyey ma siirkii ummada oo dhan, saxafadda waxaan ka codsanayaa in hunguri-dhibanada liis kooda loo bayamiyo ummada si anay mar kale khatar u gelin Somaliland, tarikhduba we cadeen!!!???
Guud ahaan waxaa somalida cado u noqotay, in qofkii waxa qaribay ee dumeyey ama dumin gadhay dal dhan aan wax loogu qaban ama aan la soo qadin, oo meesha uu dono maro jagada uu donana u cararo helana, sida manta ina heysata , suaal madaxda Somaliland waa kuwama? Haddi anu run aheen hadalkaas kor aan ku idhi hala ii soo sheego midka aan hore u aheen denbiile qaran??? Sidaas awgeed waxaan shacabka reer Somaliland qofqof uga codsanayaa in aan deb loo doran raga ceboobay ee Somaliland khatarta cad geliyey, haddii ayanaan midhkaas ogaan sida Xamar ayuun baynu isku meeraysan! Waar ay cunaha ha lagu dhego.????
Ugu-danbeen waxaa fican wax yalaha fican in laga barto dunida kale ee aan diintuna reebin, sida marka qof la doranayo aan lagu dooran lacag, qabiil ee lagu doorto denbi la,aan ugu-yaraan. Waxaa jirtay in sideetanaadkii dawladii Bushki weynaa in nin loo soo sharaxay madaxweyne ku xigeen dabadeen la faleyey oo la yidh ebel waa kuma? Markaas waxaa la helay hadal uu beri yidhi oo ahaa dadka madow waa in lagu celiyo adoonsigii! Markaas ayaa la yidh ninkaasi ma noqon karo madax-weyne ku xigeenka america wana loo diday jagadi, hadaba aniga oo aan qofna magacabin bal eega dadaka madaxda manata inoo ah ????????????????????????????????????????
Gunanad, denbiile, Hunguridhibaan ,calooshisa u sheqeeye,wax iskuma fale, laluush qate,laluush bixiye, shisheye kal-kaal, mato- umatudhe, mac madoone………iyo malafsade meel danbe yuu inoo fadhisan hadi kale daxumada laga bixmayo.
Ibrahim Mohamed Hassan Canada